म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला ! – ramechhapkhabar.com
म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला !
म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापनजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगी सकेको छ ।
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडौको बसुन्धारामा नहि बसि रहेको छु । त्यस कारणा मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु परने भएको हुदा सोहिवमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा आज मैले राम्रो असल केटाको खोजिले गर्दा यो फेसबुक मार्फत सबैले जान कारी गराएको छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ ।
यदि तपाइमा मैले भने जस्तो गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहोला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुरोध सबैमा गर्दछु । मैले आज सम्म आइपुग्दा धेरै दुखहरू भोगेको हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालको केटा चाहिएको हो । मेरो हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म सँगै सधै वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपन नभएको हुनु पर्नेछ ।यस कारणा पनि मैले त्यस्सतो खालको केटा खोजेको हो । आजकाल यस्ता खालका फेसबुक पोष्ट, पत्रिकामा विज्ञापन भेटिन्छन् । त्यही विवरण यहाँ पेस गरेका हौँ ।यस्ता बिज्ञापन धेरै आउने हुँदा जापान जान चाहानाहुने राम्रो सङ बुजेर मात्र अघि प्रक्रिया चाल्नुहोला ।
सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇